နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းမှုများကို ပိတ်ပင်သည့် ဟန့်တားမှုလုပ်ရပ်များ ရှောင်ရှားရန် လိုအပ် - Yangon Media Group
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဖြေရှင်းမှုများကို ပိတ်ပင်သည့် ဟန့်တားမှုလုပ်ရပ်များကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆိုကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းက AA အဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်အချို့ကို အကြမ်းဖက်တိုက် ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၂(က)အရ အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အမှုဖွင့်ထားသူများကို ဖမ်း၊ မဖမ်းနှင့် တရားစွဲ၊ မစွဲဆိုသည့်အခြေ အနေသည် မူဝါဒဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်နေပြီး ထိုအခြေအနေကို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသည့် NRPC ဘက်သို့မေးမှသာ ပြည်စုံမည်ဟု တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဧရာဝတီသတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုထားသည်။
”ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်လို့ ဦးတည်ချက်ထားတယ်ဆိုရင် ဒီလိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အခင်းအကျင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့သည် နိုင်ငံရေးအရ မဖြေရှင်းနိုင်လို့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေ ရသော်လည်းပဲ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဟန့်တား လိုက်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို ရှောင်ရှားလိုက်ဖို့ လိုတယ်။ ပြောချင်တာသည် AA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ တစ်ဖက်မှာ သတ်မှတ်မယ်။ တစ်ဖက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာခေါ်မလဲ ကျွန်တော်တို့သည် ချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာ ဟန်ချက်ညီတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဟန်ချက်လွဲတဲ့ချဉ်းကပ်မှုမျိုးဖြစ်နေတယ်”ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် စာရေးဆရာကိုဝက ပြောသည်။
တိုင်းပြည်အတွင်း နှစ်ပေါင်း ၇ဝ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းများအရ လက်နက်ကိုင်စွဲသည့်နည်းလမ်းသည် ဖြေရှင်း၍မရခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမှသာလျှင် အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူများက ထောက်ပြကြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သည့် အင်အားစု များသည် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရန်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ ရှိနေခြင်းကြောင့် ထိုရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိရန် အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှသာ ငြိမ်း ချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။
”သက်ဆိုင်တဲ့ အင်အားစုအားလုံးပေါ့ ဟန်ချက်ညီတဲ့ချဉ်းကပ်ပုံမျိုး လုပ်စေချင်တယ်။ AA ကိုလဲ တိုက်တွန်းလိုတာသည် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းက ပြတဲ့သင်ခန်းစာကို အသုံးပြုပြီး လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကို AA ဘက်ကလဲ ပီပီသသပြစေချင်တယ်။ တပ်မတော်ဘက်ကလဲ ဒါနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် အဆင်သင့်ကြိုဆိုမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကို ပီသအောင်ပြစေချင် တယ်”ဟု ကိုဝက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
မန္တလေးမြို့ ကုသိုလ်တော် ဘုရားအနီး ‘မြန်မာ့သရက် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ‘သရက်သီး ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျ??
ပုဂံ/ညောင်ဦးသို့ လာရောက် လည်ပတ်သည့် ဧည့်သည်များ E-bike (ဘက်ထရီ) ဆိုင်ကယ်များဖြင့်သာ လည်ပတ်ကြသြ??